धेरैजसो आमाबाबुले छोराछोरीको जीवनमा हिड्ने महत्त्व हल्कासित नलिनुहोस्। ताजा हावा, घाम र बच्चाहरु संग कुराकानी - यो मुख्य परिणाम आमा र बाबु सडक चाडहरूमा देखि, को अनुसार छ। तर, पूर्व-स्कूलमा शैक्षिक संस्था एक सम्पूर्ण फाइल प्रत्येक समूहमा हिँड्छ छ! जहाँ Kiddies 3-4 वर्ष पनि शिक्षा सामाग्री संकलित दोस्रो कान्छो समूह, मा।
कुल पैदल योजना
शिक्षक बच्चाहरु संग सिर्फ एक पैदल भन्दा बढी वैश्विक चुनौतीहरू सामना अघि। प्रत्येक पैदल विशिष्ट विषय हुन्छ र4तत्व समावेश:
शीर्षकहरू मनसायलाई पाठ्यक्रम सम्बन्धित चलाउँछ। उदाहरणका लागि, एउटा फाइल गिरावट मा दोस्रो कान्छो टोली चराहरूले संग familiarity समावेश चलाउँछ। त्यसपछि मोडेलिंग मा जाडो खेल बारे पुस्तकहरु पढ्ने, चरा sculpt र विषयमा टिप्न हुनेछ।
अनुसार पालन गर्न एक उदाहरण मा किंडरगार्टन मा चरा थाह हुनेछ। प्रदायकहरूको मात्र तिनीहरूलाई बारेमा कुरा गर्नुपर्छ, तर पनि छोराछोरीको पुर्जा, फिड गति ध्यान। यो बाहिरी खेल र शारीरिक शिक्षा ( "एक धुनमा जस्तै वाल्क", "sparrows जस्तै हाम फाल्न") मा प्ले चरा को व्यवहार छ।
कुनै कुरा लेखक पर्छ के फाइल यसको सामग्री दोस्रो कान्छो समूह विषय-भूमिका-निभाउने खेलहरू हुन्छन् चलाउँछ। तिनीहरूले एक predator तिनीहरूलाई शिकार गर्दा छोराछोरी, चराहरूले को स्थिति महसुस गर्न वा जाडो पर्याप्त खाना छैन मदत। तसर्थ, अन्तिम चरणमा feeders र चरा को लगातार रुचाउने झुन्डिएको गरिनेछ।
एक पैदल योजना कसरी बनाउन
बिक्री मा प्रत्येक समूहको लागि कार्ड फाइल विशेष शैक्षिक किताबहरु हरेक दिन हिँड्छ छ। तर, किताब काम गर्न, त्यसैले एक विशेष कार्ड, जो छोटकरीमा निर्धारित बनाउन असहज शिक्षकहरू उद्देश्य र उद्देश्य चल्छ, खेल शीर्षक, काम को वर्णन, बाह्य सामाग्री।
शिक्षकहरू फाइल सुरु लागि दोस्रो कान्छो समूह नांद छ चलाउँछ। तर छोराछोरीलाई हेरविचारकर्ताओं कविता, संकेत, नर्सरी राइम्स, पहेलियों रूपमा टिप्न, पाठ को विस्तृत सारांश सल्लाह दिन्छन्, helter-skelter छरिएका छैन।
शिक्षक अतिशयोक्ति, तुलना, विशेषण, वर्णनात्मक विशेषण ध्यान, बच्चाहरु को अवलोकन को विकास र आफ्नो बोली गतिविधि बढी ध्यान दिन्छिन् (हिंसात्मक बतास, सूर्य रातो छ)। प्रत्येक संस्थाले कुन संग सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया बनाउछ अनुसार, यसको आफ्नै शैक्षिक स्तर र कार्यक्रम छ भनेर याद गर्नुहोस्।
subordinated के उद्देश्यका फाइल हिँड्छ?
दोस्रो जुनियर समूह दुई पटक एक दिन चलाउँछ। विषय चल्छ सारा दिन वा आसन्न लागि एकीकृत गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, बिहान र साँझ सूर्य मतभेद हेर्न, वा बिहान बालुवा को गुण अध्ययन गर्न, र साँझ मा चरा हेर्न।
यो उमेर समूह निम्न कार्यहरू मा हिड्ने:
प्रत्येक सिजन को विशेषताहरु अध्ययन;
जनावर बीच भिन्नता, चरा, कीरा, बिरुवाहरु, को DOU स्थित जुन;
सक्रिय शब्दावली को संवर्धन;
हेरविचार र अवलोकन को विकास;
गठन तार्किक सञ्चालन (तर्क कटौती, संश्लेषण, विश्लेषण र अरूलाई।);
शारीरिक र मानव कौशल बलियो।
कार्ड सूचकांक हिँड्छ मा दोस्रो साना समूह तपाईं परिवर्तन मौसम अवस्था संग रोजगार को ठाँउ परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, साँझ लागि योजना थियो फूल निद्रामा गर्न तयार बाटो को निगरानी, तर किनभने वर्षा को सबै कक्षाहरू समायोजित छन्। कारण हिँड्छ बच्चाहरु चाँडै ज्ञान अझ र आमाबाबुले आफ्नो अवलोकन हिट गर्न सक्नुहुन्छ!
शिविरमा मा घटना। शिविरमा घटना कम्पनी अधिकारी
पूर्वप्राथमिक शिक्षक ध्यान दिनुहोस्: उच्च साहित्यिक समूह मा पढ्दा
अद्भुत ललोन गुड़िया
सपना मा मरेको - यो के हो?
"Naruto" को प्रविधी: पूर्ण सूची